နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌ နှင့်ရုံးအဖွဲ့ဝင်များ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း | MoeMaKa Burmese News & Media
Log In Burmese Community News and Media Station – PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA – send email to editors @ moemaka.com ((510) 854-6501) မာတိကာ
မိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၃
၂၀၁၂ ဧပြီလ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအပြီး နောက်ပိုင်းကာလ၊ လွှတ်တော်တွင်း အငြင်းပွားနေသော အခြေခံဥပဒေခုံရုံးဆိုင်ရာအတွက် ရာထူးခန့်ထားမှုများကို သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က ထုတ်ပြန်လိုက်သည်ကို တွေ့ရသည်။
ဓာတ်ပုံ – မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ ၂၆ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀၁၃။ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးအမိန့်အမှတ် (၁၂/၂၀၁၃)။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၅ ရက် ။
အခြားဖတ်ချင်စရာ မိုးမခမီဒီယာ ...တရုတ်နဲ့ ဂျပန်တွေ စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ သဲများအကြောင်း သိထားသင့်သမျှမထသ ကပြည်သူတွေကို လိမ်နေပြီဥပသကာတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်နယူးယောက်၊ ဘတ်ဖဲလိုးရောက် မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့ ၈၈ ကိုဌေးကြွယ် တွေ့ဆုံပွဲမြင်ကွင်းအဖေ့ဓားမိဘမဲ့ကလေးများကို စောင့်ရှောက်နေသူ ဆရာလေးဒေါ်ဧကစာရီနဲ့ တွေ့ဆုံခြင်းေ နွနှောင်းဝ သ န် ရဲ့မှာတ မ်းရှ ည် (Aung Way)မိုးမခရဲ့ အောက်တိုဘာ စာကိုး စကားကိုး – Quotes in Oct 2012ရောက်တတ်ရာရာအတိုအစများဖွဲ့ဆိုခြင်းZemanta
ထပ်ဆင့်ဝေမျှပေးရန် ...EmailPrintMoreDiggLike this:Like Loading...အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:ဓာတ်ပုံသတင်း	Comments are closed.
Myanmar Searches Ways to Support Students of Poor Families
Shinawatra University Offers Scholarship for Myanmar
Indian Carbon Reduction Stoves Eye for Myanmar Rural Market
ရန်လိုကျွဲရဲ့ အညွန်းစာများ	မိုးမခ Twitter
မိုးမခ ဓာတ်ပုံများ မိုးမခမျက်နှာနှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန်	Select Month May 2013 (193)
Events	[8th June SatDay] ၈၈ မျိုးဆက်များနဲ့ Utica Burmese Community Meeting
[21st May Tuesday] ၈၈ မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်များနဲ့ Las Vegas
[25th May - Saturday] မင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး နယူးယောက်မြို့တော်
[1st June Saturday] ၈၈ မျိုးဆက်များနှင့် San Francisco
[2nd June Sunday] 88 Generation & LA
[2013 Year Schedule] မုဒိတာရွှေကျောင်း ပြက္ခဒိန်
[2013 Year Schedule] မေတ္တာနန္ဒကျောင်း ပြက္ခဒိန်
မိုးမခမှာ ကြော်ငြာပါLatest မိုးမခလမ်းညွှန်
Cheap Tickets Travel (ရွှေမြန်မာများအတွက်)ကုသလကာရီ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း﻿၊ SF Bay, Fremontအလိုတော်ပြည့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ SF BayMyaing Dental - ဒေါက်တာလှမြိုင် သွားကျန်းမာရေးဆေးခန်းဒေါ်ကြင်ကြင်စိန် ရှမ်းခေါက်ဆွဲ - Daw Kyin Kyin Sein - Shan Noodle HousePhoo Pwint Store - ဖူးပွင့်စတိုး၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုငါးကျမ်းပြန် သာသနရိပ်သာ၊ အရှင်ဓမ္မပီယမေတ္တာနန္ဒ၀ိဟာရကျောင်းတိုက်။ SF Bay Areaမုဒိတာရွှေကျောင်း။ SF Bay Area, အရှင်ဉာဏိကာဘိဝံသမဟာစည်သာသနရိပ်သာ (Mahasi Sasana Yeiktha)
မိုးမခနေ့စဉ် အီးမေးသတင်းလွှာ ရယူပါ	Subscribing to Moemakadaily
Your email address:Your name (optional):
You may enteraprivacy password below. Create your PASSWORD hereReenter password to confirm:
မိုးမခမှာ အသစ်တင်တိုင်း သင့်အီးမေးထဲကို အရောက်ပို့မယ်။ Join 531 other subscribers
မိုးမခမာတိကာစဉ်	စာပဒေသာ (872)
ဓမ္မဘေရီ အရှင်ဝီရိယ (တောင်စွန်း) (9)
ဦးမျိုး (ဥပဒေ) (3)
ကျော်သူ နဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်း (189)
ဇော်အောင် (မုံရွာ) (21)
မောင်ကျေးရေ (ကယ်လီဖုိုးနီးယား) (6)
မိုးမခကို ပေးတဲ့စာ (189)
ရေခြားမြေခြား မြန်မာများ (66)
သမိုင်းနဲ့ အစဉ်အလာ (244)
Suu 67 စုစည်းမှု (8)
လူများ၊ ရုပ်ပုံလွှာများ (82)
ဖြစ်ရပ်များ၊ အမှတ်တရများ (55)
Cartoon Box (718)
သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ စာကို အနည်းဆုံး ၁ ဒေါ်လာ လှူပြီး မိုးမခကို ကူညီပါ	စာဖတ်သူတွေ ကူတာ၊ လှူတာနဲ့ မိုးမခ ရပ်တည်ပါတယ်	$ Twitter: moemakaကူမိုးကြိုး - တိုင်းပြည်အနာဂတ်သည် ... (ပုံ တပ်မတော်) http://t.co/QvUi65HuEh about3hours ago ReplyRetweetFavoriteနောင်ဆုို http://t.co/WGx9eVQBKo about9hours ago ReplyRetweetFavoriteကမ္ဘာမှာလည်း အာဏာရှင် တုို့လည်း အာဏာရှင် သံစဉ်သီချင်းနဲ့ ကြီးပြင်းခဲ့ကြတဲ့ တုို့လူမျိုး http://t.co/e871uvecpx about 10 hours ago ReplyRetweetFavoriteကာတွန်း စောငို - တရုတ်မျိုးဟေ့ ဒို့ဗမာ ... အရေးတော်ပုံ အောင်ပါစီ http://t.co/sUpL6lhmXY 05:38:04 AM May 25, 2013 ReplyRetweetFavoriteဦးသိန်းစိန် အမေရိကန်မှာ အမြတ်လာထုတ်သွား - Win Aung Gyi http://t.co/JxMlPm8BTd 05:31:50 AM May 25, 2013 ReplyRetweetFavorite@moemaka Copyright © 2013 MoeMaKa Burmese News & Media. All Rights Reserved.
Action & Movement (လှုပ်ရှားမှုများ၊ လှုံ့ဆော်မှုများ)
1990 ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲ မှတ်စုမှတ်တမ်းများ
HIV Information for Myanmar – HIM
Myanmar ICT Development မြန်မာပြည် အိုင်စီတီ ဖွံဖြိုးရေး
Buddhism & Burma (မြန်မာပြည်က ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ)
Shwe Nya War Sayadaw (ရွှေည၀ါဆရာတော်အတွက် ဘလော့ဂ်)
ဓမ္မရံသီ Australia ဓမ္မစင်တာနဲ့ စာမျက်နှာများ
နိဗ္ဗာန်ဆောက် Burmese Community ထိုင်းနိုင်ငံ၊
ပါရမီ ၁၀ပါး ဓမ္မ၀က်ဆိုက်
Burmese Language (မြန်မာစာ ဘာသစကား)
Burmese – English Dictionary by Sealang
ရှမ်းရိုးမ မြန်မာအီးဘုတ် စာကြည့်တုိုက်
လမ်းအိုလေး စာ၊ ကဗျာ စုစည်းမှုများ
ဟိန်းတင့်ဇော် အီးဘုတ် Library
Community Related (မြန်မာမိသားစု ရပ်ဝန်း)
Coral Arakan – ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်း သတင်းစဉ်
Dr San San Myint (MD) – ဒေါက်တာစန်းစန်းမြင့် (အထွေထွေရောဂါကု ဆရာဝန်) SF Bay Ara
Save Irrawaddy SF – 2011 Nov Community Forum
Save Irrawaddy SF Campaign Activity
Education Related (ပညာရေးဆိုင်ရာ)
Speack English Learning Online
Toefl Paperbase Test Online Registeration
Government Related (နိုင်ငံတော်နဲ့ ပတ်သက်သမျှ)
Myanmar GOV – Ministry of Information website
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေ ဒေတာဘေ့စ်၊ မော်ကွန်းတိုက်
မြ၀တီ ပြန်ကြားရေး ၀က်ဆိုက်
History & Events (သမိုင်းနဲ့ မှတ်တမ်း)
၁၉၈၉ သာယာဝတီထောင် Anti-Labor အကြမ်းဖက်ခံရမှု
Hobby Related (၀ါသနာပါရာ အစုအဖွဲ့များ)
88 Linker Blogs
Devian Art – လက်ရာသစ်အနုပညာများ
Di Go Lar ဒီဂိုလာဘလောက်
Free Myanmar Lyrics မြန်မာသီချင်းစာသားများ
Free Thinker ကောက်နုတ်ချက်စာများ ဆောင်းပါးများ
International Media (ပြည်တွင်း ပြည်ပ မီဒီယာများ)
Burma Today News – NYC
IT Related (နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ)
Myanmar Mobile App – လမ်းညွှန်များ
Kitchen - မီးဖိုချောင် ချက်နည်း ပြုတ်နည်း
London က ဓနုဖြူဒေါ်စောရီ ဟင်းလျာများ
Peti Chef – နိုင်ငံတကာက စားသောက်ဖွယ်ရာများ နည်းနာများ
ခိုင်ခိုင်ကျော် ချိုင့်ဆွဲ၊ လပေးနဲ့ ထမင်းဆိုင် (ရန်ကုန်)
စိတ်စေရာ – စိတ်၏စေရာအတိုင်းဘ၀ကိုလွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာပျံသန်းသွားချင်တယ်
MoeMaKa Team (မိုးမခအဖွဲ့သားတွေရဲ့ ဆိုက်များ)
MoeMaKa 2009 – မိုးမခ ၅ နှစ်ပြည့် စာရေးဆရာများနှင့် မိတ်ဆုံပွဲ
SFBC – ၈လေးလုံး ၂၃ နှစ်ပြည့် အခမ်းအနား 2011 (Oakland)
SUU – SF ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဆန်ဖရန်မြန်မာမိသားစုများ တွေ့ဆုံပွဲ 2012
ကိုထွန်းဝေ (ဂျပန်) ၏ စာမျက်နှာများ
PDF Books (ပီဒီအက်ဖ်နဲ့ အီးဘုတ်များ)
Knowledge & Wisdom Talks (သုတပညာလေထန်ကုန်း)
NLD DWave e-Journals
People (လူများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်များ ဆိုင်ရာ)
Cartoon Pe Thein Facebook – ကာတွန်း ဦးဖေသိန်း၏ ဖေ့စ်ဘွတ်
May Thin Gyan Hein – မေသင်္ကြန်ဟိန်၏ စာများ
ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း ကိုမျိုး (Ko Myoe)
ထက်အောင်ကျော် – သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီးစဉ် …
Religion (ဘာသာပေါင်းစုံ အစုအဝေး)
Zeya Thukha Dhamma Yeikthar – ဇေယျသုခဓမ္မရိပ်သာ၊ အမာရီလို၊ တက္ကဆပ်ပြည်နယ်
US Related (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု)
DV 2012 Green Card Lottery
Cho Tu Zaw – ချိုတူးဇော်ရဲ့ ဘလောဂ့်
Junior Win In English – Blog
Khet Mar's Tea Shop – ခက်မာ၏ ဆောင်းပါးများ